“सगरमाथा” चढ्दै गर्दाको डरलाग्दो भिडियो सार्वजनिक, यस्ता छन दृश्यहरु ! (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं – किर्तिमानी राख्ने होडमा लागेका कैयौ आरोही मध्ये बिस्वकै अग्लो सगरमाथा शिखरबाट ओर्लन नसकेर एक बेलायती आरोहीको शनिबार मृत्यु भएको छ। उनीसहित यो सिजनमा सगरमाथा आरोहणमा मृत्यु हुने पर्वतारोहीको संख्या १० पुगेको छ। यो सिजनमा सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल चढ्दा मृत्यु भएका पर्वतारोहीको संख्या भने १८ पुगेको छ। पर्यटन अधिकारीहरूका अनुसार कमजोरी, थकान र अत्यन्त भीड भएकाले आरोहण÷अवतरणमा हुने ढिलाईका कारण पर्वतारोहीको मृत्यु भएको हो।
पर्यटन विभागले यो सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्न ३ सय ८१ जना पर्वतारोहीलाई अनुमति दिएको थियो। यति धेरै जनालाई आरोहण अनुमति किन दिइयो भनेर प्रश्न उठेको छ। सरकारले सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिन जनही ११ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिने गरेको छ।
यस वर्ष पनि सगरमाथाको शिखरनजिक आरोहीहरूको ठूलो भीड र लामो पंक्ति देखिएका तस्बिर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। सगरमाथामा यसै साता एक नेपाली, एक अस्ट्रियाली र एक अमेरिकाली आरोहीको मृत्यु भएको छ। कसरि चढ्छन त सगरमाथा ? पर्वतआरोही लाल बहादुर जिरेलले खिचेर ल्याएको भिडियो हामीले तल राखेका छौ । भिडियो हेर्नुहोस ।
* धेरै तनाव लिनेलाई मष्तिष्क संकुचनका साथै स्मरण शक्तिमा ह्रास !